ညီအစ်မနှစ်ယောက် | CeleTrend
September 8, 2020 by CeleTrend
မောင်မောင်……အရပ်က (၅)ပေ (၉)လက်မ၊ ရင်အုပ်ကားကားနှင့် ယောက်ျားပီသ ခန့်ညားသူ။ အသက် က(၂၇)နှစ်၊ ရန်ကုန်တွင် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သူ။ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသား……။ ဘာဆိုဘာမှ ပူပန်စရာမရှိ သူ။ မိဘများပေးပို့သော ငွေအလုံအလောက်နှင့် ဝါဿနာပါရာ ပန်းချီပညာကို လေ့လာလိုက်စားနေသူ…။ ပြဿနာ၏ အခြေခံက မောင်မောင်နေထိုင်ရာ ဘေးခန်းမှ ညီအစ်မ(၂)ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုညီအစ်မ(၂)ယောက် က ခေတ်မီသည်။ ပွင့်လင်းသည်။ ရဲတင်းသည်။ ဤအချက်များနှင့်အတူ အကြီးမဖြစ်သူ သူဇာ၏အသက်(၁၉)နှစ် နှင့် လိုက်ဖက်သည့် အရပ်(၅)ပေ၊ (၅)လက်မ။ ခန္ဓာကိုယ် အတိုင်းအထွာ…ရင် ၃၅၊ ခါး ၂၂၊ တင် ၃၈ တို့ရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အငယ်မဖြစ်သူ နန္ဒာက အသက်(၁၆)နှစ်၊ အရပ်(၅)ပေ၊ (၄)လက်မ၊ ခန္ဓာကိုယ် အတိုင်းအထွာ ရင် ၃၃၊ ခါး ၂၂၊ တင် ၃၈ တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ အငယ်မဖြစ်သူ နန္ဒာက ရင်သားအနည်းငယ်ပိုသေး ခြင်းနှင့် အရပ်တစ်လက်မခန့် ပုခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုထွားသယောင်၊ တင်ကြီးသယောင်။ သူဇာက တကယ့်ကုလား ဆင်ရုပ်…။ တောက်ပသည့် မျက်လုံးအစုံနှင့် ထူအမ်းအိတွဲသော နှုတ်ခမ်းအစုံက မြင်သူတိုင်းစိတ်ကို မူးယစ်ရီဝေ စေသည်။ နန္ဒာကတော့ အရှေ့တိုင်းရုပ်…ဂျပန်မလေးလိုလို ဟောင်ကောင်မလေးလိုလိုနှင့် သွက်သွက်လက်လက် လှုပ်ရှားဟန်ကြောင့် ပရမ်းပတာ လှုပ်ခါဝှေ့ရမ်းသွားတတ်သော တင်အစုံနှင့် မြင်သူတကာကို ညှိ့ယူဖမ်းစားတတ် သူ…။ ကျောင်းများပိတ်ထားချိန်မို့ အိမ်မှာပဲ လွတ်လပ်စွာ နေကြသည်။ နေ့လည်နေ့ခင်း မိဘများ အလုပ်သွား ချိန်ဝယ် ညီအစ်မ(၂)ယောက်သား ဝတ္ထုဖတ်လိုက်… ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်နှင့် အနားယူ အပန်းဖြေတတ်ကြသည်။ သူမတို့နှစ်ဦး၏ ခေတ်နှင့်အညီ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု လွတ်လပ်စွာ နေတတ်မှုတို့က မောင်မောင့်ကို မြူဆွယ်နေသ ယောင်… သတိထားမိသည်မှာလည်း ကြာပြီ…။
မသင့်တော် ဟူ၍ စိတ်ကို အနိုင်နိုင် ချွန်းအုပ်ထိန်းသိမ်းထားရ သည်။ မောင်မောင့်အတွက် မမေ့နိုင်သော နေ့တစ်နေ့ပြီးချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ မောင်မောင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုနေ့က မောင်မောင် နေ့လည်ခင်းဘက် တစ်ဦးတည်း ပန်းချီရေးနေစဉ် သူမတို့အခန်းဆီမှ တိတ်ဆိတ် ခြင်းကို ထွင်းဖောက်ကာ စကားပြောသံ ကြားရသည်။ “ နန္ဒာ…တိုးတိုးပဲဖွင့်နော်… ဟိုဘက်ခန်းက လူကြီး ကြားသွားအုံးမယ်…” “ ကြားသွားလည်း ကောင်းတာပေါ့ မမရယ်… နန္ဒာတို့အတွက် အဖော်တောင်ရသေးတယ်…. ဟဲ…ဟဲ…” “ သေနာမလေးနော်…နင် ထ ကိုထတယ်……” “ အလကားပြောတာပါ မမရယ်…အော်…ဒါနဲ့ မမ ငှားလာတဲ့အခွေက ကောင်းရဲ့လား…ဘယ်လို ဇာတ်မျိုး လဲ…” “ မသိပါဘူးဟယ်……ကောင်းတယ်လို့တော့ ငါ့ သူငယ်ချင်းကပြောတာပဲ… အပြည့်ပါတဲ့ကားတဲ့…” “ ဖွင့်လိုက်တော့မယ်နော်…မမ ” “ အေး…” ကြားရသောစကားသံများက မောင်မောင်ကို စိတ်ဝင်စားသွားစေခဲ့ရာ… နံရံတွင် ဖောက်ထားသော အပေါက်ငယ်မှတဆင့် သူမတို့ကို ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ မောင်မောင်ရင်တွေ ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားသည်။ ပေါင်ရင်းထိတိုသော မီနီစကပ်ကိုယ်စီနှင့် ဂျိုင်းပြတ်စွပ်ကျယ်တို့ဖြင့် လှချင်တိုင်းလှနေသော နတ်မိမယ်လေး (၂)ပါး… အငယ် နန္ဒာက ဗီဒီယိုပြစက်စင်ရှေ့တွင် လေးဘက်ကုန်းရင်း ခလုတ်ကို နှိပ်နေသည်။ စကပ်က ပေါင်ရင်း ထိတိုသောကြောင့် ကုန်းလိုက်သည့်အခါ စကပ်မှာ အပေါ်သို့တက်သွားပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီ အနီလေးအောက် မှ အနောက်ဘက်သို့ ဖောင်းကြွထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နေရာလေးကို မြင်ရသည်။
ပြီး ဖြူဖွေးသော ပေါင်တံ (၂)ချောင်းကလည်း အင်မတန်ကို လှပလွန်းနေသည်။ အကြီးမဖြစ်သူ သူဇာကတော့ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆက်တီ ပေါ်တွင် ပေါင်နှစ်ချောင်းလိမ်ယှက်ပြီး ထိုင်နေသည်။ ဗီဒီယိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး နန္ဒာက သူဇာဘေးတွင် ဝင်ထိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲ တီဗွီဖန်သားပြင်ထက်မှာ အမေရိကန်သူ ချောချောလေးနှင့် တရုတ်မ ချောချောလေးတို့ စကားပြောခန်းပေါ်လာသည်။ မောင်မောင်သည် သက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ရင်း အသာဆက်ကြည့်နေလိုက်သည်။ ဗီဒီယိုထဲက (၂)ယောက်စကားတွေပြောသည် တော့ နားမလည် … အမေရိကန်မလေးက ဆိုဖာပေါ် ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ အဝတ်အစားများကို အ ကုန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီး တရုတ်မလေးကို ပြုံးစိစိဖြင့် ကြည့်ရင်း သူမခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ဖက်လှည့်ပြကာ အ နားသို့လျှောက်သွားပြီး ဆွဲယူကာ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်နမ်းယူလိုက်သည်။ အပြန်အလှန် ပွတ်သပ်နမ်းရှုတ်ရင်း အမေရိကန်မလေးက တရုတ်မလေး အဝတ်အစားများကို အကုန်ဆွဲချွတ်ရင်း တရုတ်မလေး နို့ကို လျှာဖျားလေးနှင့် ကလိပေးနေသည်။ ပြီး နောက် ဆိုဖာပေါ် တရုတ်မလေးကို ထိုင်စေကာ သူမက အောက်တွင်ထိုင်ပြီး စောက်ဖုတ် ဖွေးဖွေးအား ယက်ပေးနေရာ တရုတ်မလေးမှာ တဟင်းဟင်းနှင့် ညည်းညူကာ သူမစောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှစ် ဖက်နှင့် ဖြဲပေးထားရင်း တွန့်လိမ် ကော့ထိုးပေးနေသည်။ ပြီးနောက် အမေရိကန်မလေးကို တစ်ခါပြန်ပြီး တရုတ်မ လေးက လုပ်ပေးသည်။
နှစ်ဦးစလုံး ဖီးလ်တက်လာချိန်တွင် လီးအတုကိုယ်စီဖြင့် တစ်ယောက် စောက်ဖုတ်ကို တစ် ယောက် ထိုးထည့်ကာ တအားအား အော်ဟစ်ညည်းညူရင်း ပြီးသွားကြလေသည်။ မောင်မောင်တစ်ယောက် ဗီဒီယိုကြည့်ရင်း လီးကတင်းကနဲကြွလာသည်။ စိတ်ကို အသာထိန်းရင်း ညီအစ် မ (၂)ဦးကို ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ဦးသား ဆက်တီကျောမီကို မှီကာ ကိုယ်ကို လျှောထိုင်ရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်း ထောင်ထားပြီး လက်တွေက ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်နေကြသည်။ သူဇာဆိုလျှင် အားနေသောလက် တစ်ဖက်ဖြင့် နို့အစုံကို အင်္ကျီပေါ်မှ ပွတ်သပ်နေသေးသည်။ ဗီဒီယိုက နောက်တစ်ခန်းဝင်လာသည်… တရုတ်မလေးတစ်ဦးနှင့် အမေရိကန်တစ်ဦး စကားပြောဆိုပြီး အမေရိကန်ကြီး လုပ်ငန်းစတော့သည်။ တရုတ်မလေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူနေသည်။ တရုတ်မလေးကလည်း အတင်းပြန်ဖက်ပြီး အမေရိကန်ကြီး၏ ပေါင်ဂွကြားကို ဘောင်းဘီအပြင်မှ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ ခဏအကြာတွင် အမေရိကန်ကြီးက တရုတ်မလေး၏ အင်္ကျီကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်ရာ လုံးဝန်းတင်းမာသော နို့လေး (၂)လုံးပေါ်လာသည်။ အမေရိကန်ကြီးက နို့တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်ပွတ် သပ်ပြီး ကျန်နို့တစ်ဖက်ကို ကုန်း၍ စို့ရာ တရုတ်မလေးမှာ လူးလွန့်သွားရင်း ပါးစပ်မှ တဟင်းဟင်းနှင့် ညည်းညူနေ လေသည်။ နို့ကို စို့နေရာမှ တဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုဆင်းကာ တရုတ်မလေးစကပ်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည
အမွှေး ကျို့တို့ကျဲတဲအောက်မှ စောက်ဖုတ်ကလေး ပေါ်လာသည်။ ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လျှာဖြင့် လျှက်ပေးရာ တရုတ် မလေးမှာ ကော့လန်နေလေသည်။ တရုတ်မလေးက အမေရိကန်ကြီး၏ အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီကို အတင်းဆွဲချွတ် ရာ ကြီးထွားရှည်လျားလှသည့် အမေရိကန်ကြီး၏ လီးက မတ်ကနဲ ထိုးထွက်လာလေသည်။ အမေရိကန်ကြီးက တရုတ်မလေးကို ဆွဲထူကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းပြီး ဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရာ တရုတ်မလေးက အလိုက်သင့် တင်ကို နောက်သို့ကော့ပြီး ကုန်းပေးလိုက်ရာ အမေရိကန်ကြီးက စောက်ဖုတ်သေးသေးလေး အဝတွင် လီးဒစ်ကြီး တေ့ပြီး ခါးလေးကိုလက်ဖြင့်ဆွဲကိုင်ကာ ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ (၃)ပုံ (၂)ပုံခန့် ဝင်သွားလေသည်။ ဆယ်ချက်ခန့် ဆောင့်လိုက်သောအခါ အရင်းထိဝင်သွားလေသည်။ တရုတ်မလေး၏ မျက်နှာလေးမှာ အလွန်ကို အရသာရှိဟန် ပေါ်လွင်နေသည်။ မောင်မောင်သည် ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ထောင်ထလာသော သူ၏လီးကြီးကို အသာကိုင်ကာ ဖြည်း ဖြည်းချင်း ဂွင်းတိုက်နေစဉ် သူဇာ၏ စကားသံကြောင့် သူတို့ညီအစ်မထံ မျက်စိက ရောက်သွားသည်။ “ ဟဲ့ နန္ဒာ…နင် အဲဒီလို ခံစားဖူးလား ဟင် ” “ ဟာ…မမကလည်း ဘယ်လုပ်ဖူးပါ့မလဲ…” “ ငါတို့ ဟို တရုတ်မနဲ့ အမေရိကန်မ လုပ်သလို လုပ်ကြည့်ရအောင် ” “ ရပါ့မလား …မမ ရယ်…” “ ဖြစ်ပါတယ်ဟာ…သွား…နင် အိမ်ရှေ့တံခါးသွား ပိတ်ခဲ့…” ပြောပြောဆိုဆို သူဇာက မတ်တပ်ထရပ်သည်။
နန္ဒာက အိမ်ရှေ့တံခါးအား သွားပိတ်သည်။ ပြီး ပြန် ရောက်လာကာ သူ့အစ်မကို… “ မမ တို့ ဘယ်ကစလုပ်မှာလဲ…ဟို အတုတွေလည်း မရှိဘူး…” “ ရတယ်…နင် အဝတ်တွေချွတ်ထားနှင့်…ငါ နောက်ဖေးမှာ ခရမ်းသီးတွေ တွေ့ထားတယ်…” ဟု ပြောပြီး သူဇာ နောက်ဖေးဝင်သွားသည်။ နန္ဒာက အပေါ်ကစွပ်ကျယ်လေးကို ခေါင်းပေါ်မှ ကျော်ချွတ်လိုက်သည်။ အောက်တွင် ဘရာစီယာဝတ် မထားသောကြောင့် တင်းမာတောင့်တင်းသော နို့လေး (အကြမ်းပန်းကန်လုံးသာသာ သာရှိသည်) ပေါ်လာသည်။ နို့ သီးခေါင်းလေးက လက်သန်းထိပ်လောက်တောင်မရှိ နီရဲကာ ထောင်ထနေလေသည်။ မောင်မောင်မြင်ရသော မြင် ကွင်းကြောင့် တံတွေးကို ဂလုကနဲမြိုချကာ ဗီဒီယိုကို လှည့်မကြည့်ဘဲ နန္ဒာကိုသာ အတင်းစိုက်ကြည့်နေမိသည်။ နန္ဒာက အင်္ကျီလေးကို ဆက်တီပေါ်တင်ကာ မောင်မောင်ဘက်ကျောပေးကာ ဗီဒီယိုဘက် မျက်နှာလှည့်ပြီး မီနီ စကပ်လေးနှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ဖင်လေးကော့ကာ ကုန်းပြီးဆွဲချွတ်လိုက်ရာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် တင်းကားနေသော တင်ပါးကြီးက ဖွေးဖွေးဖြူကာ ပေါ်လာတော့သည်။ အောက်ခြေဖျားသို့ ကုန်းပြီးဆွဲချွတ်စဉ် စောက်ဖုတ် မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေးကို ရိုးတိုးရိပ်တိတ် မြင်လိုက်ရလျှင် မောင်မောင်မှာ ရင်တွေ တဒုန်းဒုန်းခုန်သွား လေသည်။ အဝတ်အစားချွတ်ပြီးသည်နှင့် နန္ဒာက ဆက်တီတွင် ပြန်ဝင်ထိုင်စဉ် သူဇာ ပြန်ထွက်လာသည်။ သွား စဉ်က အဝတ်ပါသေးသည်။
ပြန်ထွက်လာတော့ အဝတ်အစားမဲ့ ဟင်းချိုပန်းကန်လောက်ရှိသော နို့ကြီး (၂)လုံးက တောင့်တင်းလှသော်လည်း လမ်းတစ်ချက်လျှောက်တိုင်း တုန်တုန်သွားလေသည်။ ပေါင်ကြားရှိ အဖုတ်ကြီးမှာ အမွှေးမဲများဖြင့် အကာအကွယ်ယူကာ ပုန်းအောင်းနေသည်။ ပြည့်ဖြိုးသော ပေါင်တန်များနှင့် တင်သားများက တော့ နန္ဒာ့အတိုင်းပင် အင်မတန်မှ ကာမဆန္ဒကို တက်ကြွစရာ မောင်မောင်တစ်ယောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ဂွင်း တိုက်နေရာမှ အရှိန်နည်းနည်းမြန်လာလေသည်။ ညီအစ်မ (၂)ဦး တစ်ဦးကို တစ်ဦး နို့များကို ကိုင်တွယ်ကြည့်ပြီး ဗီဒီယိုဘက်ခေါင်းလှည့်တော့မှ မောင် မောင်လည်း ဗီဒီယိုကို ကြည့်မိရာ အမေရိကန်ကြီးက ဖင်ကုန်းပေးထားသော တရုတ်မလေးကို နောက်ကအရှိန်ဖြင့် အားရပါးရလိုးဆောင့်နေဆဲ။ ညီအစ်မနှစ်ဦးလည်း မျက်တောင်မခတ်တမ်း ကြည့်နေရာမှ အကြီးမ သူဇာ က “ နန္ဒာ…ညီမလေး…ထ…မမ တို့ လုပ်ကြရအောင်…” နှစ်ဦးသား မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ကာ တစ်ဦးခါး တစ်ဦးပွေ့ ဗိုက်ချင်းပွတ်…နှုတ်ခမ်းများ စုပ်နမ်းလေသည်။ လက်များကလည်း ကြီးမားပြန့်ကားသော တင်ပါးကြီးများကို ပွတ်သပ်လိုက် ဆုတ်ချေလိုက် စအိုဝနှင့် စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကို နောက်မှ နှိုက်လိုက်နှင့် ကာမအရသာကို ရယူနေကြသည်။ ခဏအကြာ သူဇာ က နန္ဒာ့နို့လေးကို ကုန်းပြီးစို့ရာ နန္ဒာမှာ တွန့်လိမ်လူးလွန့်သွားပြီး… “ အင်း…ဟင်း…ဟင်း…မမ ရယ်…အား… တမျိုးကြီးပဲ… အင်း…ဟင်း…ဟင်း…” သူဇာက နို့ကို စို့နေရာမှ နန္ဒာ့ကို မော်ကြည့်ပြီး “ အဲဒါကောင်းလာတာ နေမှာပေါ့…ညီမလေး ရဲ့…မမတော့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ရွစိရွစိနဲ့ အဲဒီလို လီးကြီး မျိုးနဲ့ အလိုးခံချင်လိုက်တာ…” ။
ဟုတ်တယ်…မမ……မမ လုပ်တော့……နန္ဒာ စောက်ဖုတ်လေးလည်း ရွစိရွစိနဲ့ ယားလာသလိုပဲ… … ပေး …မမ ကို နို့စို့ပေးမယ်…” နန္ဒာက ပြောပြောဆိုဆို သူဇာနို့ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ရင်း တစ်ဖက်နို့သီးခေါင်းလေးကို ငုံ့ ပြီး စို့ပေးသည်။ သူဇာက ရင်ကိုကော့ ခေါင်းကိုမော့ကာ မျက်တောင်ကို မှေးရင်း လက်တစ်ဖက်က သူမ စောက် ဖုတ်ကို သူမဖာသာနှိုက်နေရင်း ခံစားနေသည်။ ခုနက မီးဖိုထဲက သွားယူလာသော ခရမ်းသီးကြီး (၂)လုံးမှာ အရှည် (၅)လက်မခန့် ရှိလေသည်။ ထိုစဉ် သူဇာက “ ကဲ…နန္ဒာ ခရမ်းသီးထည့်ကြရအောင်……” သူဇာက ပြောပြောဆိုဆို ခရမ်းသီးကြီးထိပ်ကို လျှာနှင့်လျှက်ပြီး နန္ဒာအကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်ဆွဲ လိုက်သည်။ နန္ဒာက ဖင်ကို ဘယ်ညာရမ်းပေးသည်… ခံချင်စိတ် ပြင်းပြလွန်းသဖြင့် နန္ဒာ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အာ ထွက်လာပြီး အရည်များက ရွှဲစိုပြောင်လက်နေသည်။ သူဇာက စောက်ခေါင်းဝတွင် အသာတေ့ပြီး ထည့်သွင်းလိုက် သည်။ ပြီး ဝင်သလောက်ကို (၁၀)ချက်ခန့် အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတော့ အရည်များ ပိုထွက်လာရာ သူဇာက ခရမ်းသီးကို အရင်းမှ ပြောင်းကိုင်ပြီး စောင့်ထည့်လိုက်ရာ အရင်းနားအထိ ဝင်သွားပြီး နန္ဒာမှာ ဆတ်ကနဲ တင်သား များ တုန်ကာ ခါးကကုန်းသွားရင်း… “ အား…မမရယ်……ဖြည်းဖြည်း……အင့်……အင့်…… အင်း…… ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်…… အား……ဟား…” “ ပြွတ်……ပြွတ်……စွပ်……စွပ်……အင့်……အင့်……” “ အား……ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ်…… ဆောင့်…… ဆောင့်…… လုပ်ပါဦး…… အား…… မမ……ကောင်း… …… ကောင်း…… အား……ကောင်းတယ်…… ကောင်းတယ်……… မမ……လုပ်…… လုပ်…… အား……” နန္ဒာတစ်ယောက် ပြောပြောဆိုဆို ပြီးသွားလေသည်။
တင်ပါးများက အားမလိုအားမရ စားချင်ရာကို စား လိုက်ရသဖြင့် မောပန်းသွားဟန် ငြိမ်သက်သွားသည် … ခရမ်းသီးတန်းလန်းဝင်နေသော စောက်ခေါင်းကြီး နှုတ်ခမ်း သားများက ခရမ်းသီးကို ကျွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား တင်းတင်းညှစ်ထားလေသည်။ အင်မတန် သွေးသား တက်ကြွနေသော အရွယ် နန္ဒာတစ်ယောက် ခဏလေးနှင့် ပြီးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ “ နန္ဒာလေး…ပြီးသွားပြီလား……ဟင်……” “ ဟင်း……ဟင်း……ပြီးသွားပြီ မမ……အရမ်း ကောင်းတာပဲနော်……” နန္ဒာက ရှက်ရယ်ရယ်ရင်း ပြန်ဖြေ သည်။ “ ကဲ……ဒါဆို……မမကို လုပ်ပေးဦး…မမလည်း ကောင်းချင်နေပြီ……” “ ဟုတ်……” နန္ဒာက တစ်ခွန်းတည်းပြောပြီး သူဇာ့ စောက်မွှေးများကို လက်နှင့်ဖြဲဖယ်ပြီး ခရမ်းသီးကို စောက်ခေါင်းဝ တေ့ကာ စောက်စေ့လေးကို ပြွတ်ကနဲ စုတ်ယူလိုက်တော့ သူဇာတစ်ယောက် တင်ပါးကြီးကို အပေါ်သို့ ထိုးပေးမိ လေသည်။ နန္ဒာက စောက်စိလေးကို စုပ်လိုက် လျှာထိပ်လေးဖြင့် ထိုးလိုက် လုပ်ပြီး ခရမ်းသီးကြီးကို ပွင့်အာနေ သော သူဇာ့ စောက်ခေါင်းတွင်းသို့ အားနှင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ ခရမ်းသီးကြီးက အညှာနားအထိ ဝင်သွားလေ သည်။ သူဇာလည်း မျက်နှာပေါ်မှ နန္ဒာ့တင်ပါးကြီးကို ဖက်တွယ်ရင်း ဖျတ်ဖျတ်လူးသွားကာ…… “ အား……နာလိုက်တာ……ဖြည်းဖြည်း နန္ဒာ…… အင့်…… အင့်…… ရှီး……ကျွတ်…… ကျွတ်…… အင်း… ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်…… နန္ဒာ…အင့်…… အင့်…… စွပ်…… ပလွတ်…… စွပ်…… ပလွတ်……အင့်……အင့် ……အား……” ခရမ်းသီး စောက်ဖုတ်အတွင်း ဝင်ထွက်သံ စွပ်-ပလွတ် ဟူသော အသံများဖြင့် သူဇာ၏ တအင့်အင့် တ အားအား ညည်းညူသံများက အခန်းထဲတွင် စိုးမိုးဖုံးလွှမ်းထားသည်။
မောင်မောင်လည်း ကြည့်ရင်းက ဂွင်းကို အ ဆက်မပြတ် တိုက်နေမိသည်။ လီးကြီးကလည်း မတ်တောင်နေလေသည်။ “ နာနာဆောင့်တော့……နန္ဒာ……အင့်……အင့်…… မမ ကောင်းလာပြီ…… အင့်……အား……စွပ်…… ပလွတ် ……စွပ်…… အင့်……ပလွတ်……အား……” သူဇာ့ အသံကြောင့် မောင်မောင် ပြူးပြဲပြီး ကြည့်မိသော နန္ဒာက ခရမ်းသီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ အားနှင့် လျင်မြန်စွာ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်သည်။ သူဇာက ဖင်ကြီးကို ကြမ်းပြင်မှ တစ်ထွာခန့် မြောက်အောင် ကော့ ထိုးပေးနေသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ပြူးအာနေပြီး ခရမ်းသီးအဝင်အထွက်နှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းသားများက အတွင်း သို့ ကျွံဝင်သွားလိုက် အပြင်သို့ စူထွက်လာလိုက်နှင့် ဖြစ်နေသည်။ သူဇာ့ နို့ကြီး (၂)လုံးမှာ ရမ်းခါနေလေသည်။ မောင်မောင်လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုတ်ရေများ ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်မှာပင်…… “ အား……ကောင်းလိုက်တာ…နန္ဒာရယ်…… ဆောင့်…… အင့်……ဆောင့်စမ်းပါ…… မြန်……မြန်…… အင့်………အင့်…… စွပ်……စွပ်…… ပလွတ်…… ပလွတ်……… စွပ်……အား…… လုပ်ပါဟယ်…… ငါ…… ပြီးတော့မယ်… အင့်……စွပ်……ပလွတ်…… စွပ်…… ပလွတ်……… ပြီး……အင့်……အား…… ပြီး…ပြီ… အင့်…… အား……” ပြောပြောဆိုဆို သူဇာတစ်ယောက် တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးကာ ပြီးသွားလေသည်။ ပြီး ညီအစ်မနှစ်ဦး သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွတ်သပ်ပြီး စောက်ဖုတ်အသီးသီးအတွင်းရှိ ခရမ်းသီးများကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကြ သည်။ “ ဘွတ်……အင်း…… ဘွတ်……အား……” ခရမ်းသီးများက စောက်ရည်များဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုကာ မဲပြောင်နေသလိုပင်……နန္ဒာ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက အမွှေးမရှိ သဖြင့် နီရဲပြဲလန်နေသည်ကို ပိုမြင်ရလေသည်။ သူဇာ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကတော့ အမွှေးမဲများ ရှိနေသဖြင့် အကွဲ ကြောင်းနီရဲရဲကိုသာ မြင်ရသည်။ ပြီး အပေါ်တွင် လေးဘက်ကုန်းနေသော နန္ဒာက ထရပ်လိုက်ပြီး အဝတ်အစား များ ပြန်ဝတ်သည်။
သူဇာ ကလည်း ပြန်ဝတ်သည်။ ဗီဒီယိုကလည်း တစ်ခန်းသာပြပြီး အခွေကုန်သွားသည်။ သူဇာ စက်ပိတ်နေစဉ် သူမတို့အမေပြန်ရောက် လာပြီး တံခါးခေါက်သံကြောင့် နန္ဒာ ခရမ်းသီး (၂)လုံးကို ကောက်ကာ အိပ်ခန်းတွင်း ဝင်ပြေးလေသည်။ မောင် မောင်ကား ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်စိတ် တဖွားဖွားနှင့် ချောင်းကြည့်နေရာမှ ခွာကာ သူ့အိပ်ယာပေါ်သို့ ပစ်လှဲရင်း ခုနက မြင်ကွင်းများကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ရင်း ခံစားမှိန်းမောနေလေတော့သည်။ မောင်မောင်တစ်ယောက် ညီအစ်မ(၂)ဦး၏ မြင်ကွင်းကို နေ့စဉ်မြင်ယောင်ရင်းက ညီအစ်မ(၂)ဦး တစ်ဦး တည်း အိမ်မှာရှိချိန်ကို စောင့်မျှော်နေမိသည်။ သူ စောင့်မျှော်သော အခြေအနေကို တစ်နေ့မှာ ရရှိခဲ့သည်။ မနက် ခင်းက မိဘ(၂)ဦး ထွက်သွားပြီး မနက်(၉)နာရီခန့်တွင် အကြီးမ သူဇာပါ ထွက်သွားသဖြင့် အိမ်တွင် နန္ဒာတစ်ဦး တည်း ကျန်ခဲ့လေသည်။ မောင်မောင်လည်း အသင့်ပြင်ထားသော အအေးပုလင်းထဲသို့ စိတ်ကြွဆေးမှုန့်များထည့် ကာ မွှေလိုက်သည်။ ပြီး လမ်းထိပ်မှ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဝယ်ကာ နန္ဒာ့ အခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်သည်။ ခြေသံကြား ရပြီး တံခါးဟလာကာ နန္ဒာမျက်နှာလေး ပေါ်လာသည်။ “ အော်…ဦးမောင်…ဘာကိစ္စလဲ ” “ ကဲ…အမိ…နောက်မှမေး တံခါးအရင်ဖွင့်ပေး… ဒီနေ့ ကိုယ့်မွေးနေ့မို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့ အအေး လာပို့တာ ……” “ ဟာ…အတော်ပဲ…နန္ဒာက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ အရမ်းကြိုက်တာ ကျေးဇူးပဲ ဦးမောင်…နန္ဒာ… သွားလှယ် ထည့်လိုက်အုံးမယ်…ဝင်ထိုင်အုံးနော်…” “ အေး…အေး…” ဟု ဖြေရင်း မောင်မောင် အထဲဝင်တော့ နန္ဒာက အိမ်တံခါးကို ပြန်စေ့လိုက်သည်။ ပြီး… အအေးပုလင်းကို ခုံပေါ်တင်ကာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲထုပ်ကို ကိုင်ရင်း အိမ်နောက်သို့ ဝင်သွားသည်။ မောင်မောင် က နန္ဒာ့ နောက်ပိုင်း ရမ်းခါသွားသော တင်ပါးကြီးကို လိုက်ကြည့်ပြီး တံခါးချက်ကို အသာထထိုးပိတ်လိုက်သည်။ နန္ဒာ့ပစ္စည်းကား အင်မတန်ကို ကောင်းလှပါသည်။
ပုခုံးတွင် ကြိုးတစ်ချောင်းသာ တပ်ထားသော ပိုးသား ဂါဝန်ပျော့လေးက ပေါင်လည်ထိသာ ဖုံးလွှမ်းထားနိုင်သည်။ အိမ်နေရင်းဝတ်သည်မို့ ဘရာစီယာ ခံမထားသဖြင့် နို့ လေးများက လုံးကြွကာ နို့သီးခေါင်းလေးကိုပင် မြင်နေရသည်။ ထိုစဉ် နန္ဒာတစ်ယောက် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပန်းကန် ကိုင်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲဝင်လာသည်။ “ ဦးမောင်ရော…စားပြီးပြီလား…” “ အေးဟ…စားပြီး သွားပြီ…ဆုလေးဘာလေး တောင်းပေးအုံးနော်… အအေးလည်း သောက်… ဒါနလေး မြောက်သွားအောင်…” “ ဟင်း…ဟင်း…စားပြီးသောက်ပြီးမှပဲ ဆုတောင်းပေးတော့မယ်… ကဲ…စားလိုက်အုံးမယ်…” နန္ဒာက မုန့်ကိုသာကုန်းပြီးစားလိုက် အအေးသောက်လိုက်ဖြင့် စားသောက်နေသည်။ အင်္ကျီလည်ဟိုက် အောက်မှ ရင်ညွန့်သား မို့မို့ဖြူဖြူလေးက မောင်မောင့်ကို မြူဆွယ်နေလေသည်။ ကြည့်ပါအုံး… (၁၈)နှစ်ဆိုသော အရွယ်ရှိ မိန်းကလေးတစ်ဦးက သည်မျှဆွဲဆောင်နိုင်လေပြီလား… ကြည့်နေရင်း မောင်မောင့် ဘွားဘက်တော်က ထလာလေသည်။ မောင်မောင့် မျက်စိထဲမှာတော့ ဟိုတစ် နေ့က သူဇာ့မျက်နှာပေါ် လေးဘက်ထောက်ကာ ခရမ်းသီးတန်းလန်းဝင်နေသော အမွှေးမဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကိုပဲ မြင်ယောင်ကာ တံတွေးကို ဂလုကနဲ မြိုချလိုက်ရသည်။ စားသောက်ပြီးတော့ နန္ဒာက ပန်းကန်များ သွားသိမ်းပြီး ပြန်ထွက်လာတော့… “ နန္ဒာ…ဟို တစ်နေ့က နေ့လည်ဘက် နန္ဒာတို့ ညီအစ်မ(၂)ယောက် ဘာကားကြည့်နေတာလဲ ဟင်…” “ ဟင်…ဦးမောင် သိလား…” ဟု နန္ဒာက အံ့သြသောမျက်နှာတွင် ရှက်ဟန်အနည်းငယ်သာ စွန်းထင်းလျက် မျက်ဝန်းများက ချက်ချင်း ရီဝေသွားကာ ထိုနေ့က မြင်ကွင်းကို ပြန်လည်မြင်ယောင်သွားဟန်ရှိသည်။
ခဏအကြာ…နန္ဒာက မောင်မောင့်ကို စိတ်ကြွဆေးတန်ခိုးဖြင့် မိန်းမောကြည့်ရင်း… “ ဘာလဲ…ဦးမောင် ကြည့်ချင်လို့လား ဟင်…အခွေက မရှိတော့ဘူး ဦးရဲ့ ပြန်အပ်လိုက်ပြီ…” “ ရပါတယ်…ဦး အခွေငှားလာတယ်…ဒီမှာ… ဒီကားက ဂျပန်ကား နန္ဒာရဲ့ အရမ်းကောင်းတယ်…” နန္ဒာတစ်ယောက်ကတော့ စိတ်ကြွဆေးတန်ခိုးနဲ့ အရမ်းကို စိတ်တွေ ပြင်းပြနေပုံရသည်။ ချက်ချင်းပင် ထ ကာ အခွေကို ယူပြီးစက်ထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်သည်။ မောင်မောင် သူ့ရှေ့မှာ ကုန်းကုန်းလေး ဗွီဒီယိုဖွင့်နေသော နန္ဒာ့ကို ကြည့်ကာ လီးကြီးက အတင်းထောင်ထလာသဖြင့် ပေါင်(၂)လုံးဖြင့် ညှပ်ထားရသည်။ နန္ဒာက အခွေဖွင့်ပြီး မောင်မောင့် ဘေးတွင် ဝင်ထိုင်သည်။ မကြာပါ…ဂျပန်မလေး(၂)ယောက်နှင့် ဂျပန်လူထွားကြီးတစ်ယောက်တို့ ပေါ် လာသည်။ (၃)ပွင့်ဆိုင်ပုံစံပင် ဖြစ်သည်။ စကားတပြောပြောဖြင့် ဂျပန်ကြီးက သေးသွယ်လှပသော ဂျပန်မလေး(၂)ဦးကို ဘယ်ညာဖက်ထားရင်း စကားပြောကာ တစ်ဦးက ဆက်တီဆိုဖာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန် ဘေးတိုက်လှဲချလိုက်သည်။ ဂျပန်ကြီးက ထိုအိပ် နေသော ကောင်မလေး၏ အမွှေးကြဲသော စောက်ဖုတ်လေးကို စတင်လျှက်ပေးသည်။ နောက်ဂျပန်မလေးက ဂျပန်ကြီးနား ကြမ်းပြင်တွင် ထိုင်ပြီး လီးကို အသာကိုင်ကာ ပါးစပ်နှင့်စုပ် လျှာနှင့်ဒစ်ကြီးကိုလျှက် လုပ်ပေးနေသည်။ စောက်ဖုတ်အလျှက်ခံနေရသော ကောင်မလေးမှာ မျက်နှာရှုံ့မဲ့လျက် တဟင်းဟင်း ညည်းညူနေလေသည်။
ထို မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရင်း နန္ဒာတစ်ယောက် ဖင်လေးကြွလိုက် ပေါင်လေးချိတ်လိုက် ပြန်ချလိုက်ဖြင့် ဖီးလ်တက်နေပုံ ရသည်ကို တွေ့ရသော မောင်မောင်က နန္ဒာ့ဘက် လှည့်ကြည့်ပြီး…… “ နန္ဒာ…သူတို့ပုံစံက အရမ်းကောင်းနေပုံပဲနော် နန္ဒာရော… အဲဒီလိုမျိုး ခံစားဖူးလား…” “ ဟင့်အင်း…မလုပ်ဖူးဘူး ” “ ဒါဆို ဟိုတစ်နေ့က နန္ဒာတို့(၂)ယောက် ဘာလုပ်နေကြတာလဲ ဟင်…” “ ဦးကလည်း အဲဒီနေ့က မမနဲ့(၂)ယောက်ထဲ… ယောက်ျားလေးမှ မပါတာကို…” မောင်မောင်က နန္ဒာ့ ပုခုံးလေးကို အသာဆွဲယူပွေ့ဖက်ရင်း… “ ခု…ဦး ရှိနေပြီလေ…နန္ဒာနဲ့ဦး အဲဒီထက် အဆတစ်ရာလောက်ကောင်းအောင် လုပ်ကြရအောင်လေ……” “ ကောင်းပါ့မလား ဦးရယ်…နန္ဒာ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ…” “ လာပါ နန္ဒာရယ်…ဦး နန္ဒာ့ကို လုပ်ချင်နေတာ ကြာပြီ…” “ ကြောက်တယ်…ဦးရယ်…ဦး…” နန္ဒာ စကားမဆက်နိုင်တော့ နန္ဒာ့ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ် မောင်မောင့် နှုတ်ခမ်းက ဖုံးအုပ်သွားသည်။ နန္ဒာက အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းသည်။ နမ်းနေရင်း မောင်မောင့်လီးကြီးက ပေါင်ကြားမှ ငေါက်ကနဲ ထောင်ထွက်လာသည်။ မောင်မောင့် လက်နှစ်ဖက်က နန္ဒာ့ဂါဝန်လေးကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ဘရာစီယာ ဝတ်မထားသောကြောင့် အ ကြမ်းပန်းကန်လုံးသာသာ နို့လေး(၂)လုံး ပေါ်လာသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးက ပန်းနုရောင်ပြေးလျက် လက်သန်းထိပ် ဖျားလောက်လေးသာ ရှိသည်။ အောက်ပိုင်းမှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးက ကြီးမားပြန့်ကားသော တင်ပါးကြီးကို အတင်းဆွဲချုပ်ထားသ လို စောက်ဖုတ်နေရာမှာလည်း မို့ဖောင်းပြီး မောက်တက်နေလေသည်။
မောင်မောင်က ပါးစပ်ကို နမ်းစုပ်နေရာမှ လည်တိုင်မှတဆင့် ရင်ညွန့် ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတို့ကို လျှာဖျားလေးနှင့် တို့ထိရင်း ဆော့ကစားပေးလိုက်ရာ နန္ဒာ မှာ မောင်မောင့်ကို အတင်းဖက်တွယ်ပြီး လက်တစ်ဖက်က မောင်မောင့် ပေါင်ကြားကို ကိုင်လိုက်ရာ လီးကြီးကို ကိုင်မိသွားလေသည်။ လက်နှင့်လီးကြားတွင် ပုဆိုးစ ခံနေသဖြင့် နန္ဒာက ပုဆိုးစကို ဖြေလျှော့လိုက်သည်။ ထိုစဉ် မောင်မောင်က နို့သီးခေါင်းလေးကို အာခေါင်ထဲထည့်ပြီး လျှာဖျားနှင့် တို့ထိပေးလိုက်ရာ… “ အင်း…အင်း…ဦး ရယ်…အား…ယား… ဦး…နန္ဒာ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ ဦးရယ်…” နန္ဒာ့ စကားသံ ညည်းညူသံတို့က မောင်မောင့် ရမ္မက်ဆန္ဒကို ပိုမိုပြင်းထန်လာစေသည်။ မောင်မောင် လည်း လျှာကို နို့မှ ချက်ပေါ်သို့ ဆင်းလိုက်သည်။ ပြီး…ဆီးခုံအပေါ်စပ်ရှိ ဗိုက်သား ဖွေးဖွေးလေးကို နမ်းရှိုက်ရင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်တော့ နန္ဒာက ဖင်လေးကို အသာကြွပေးပြန်သည်။ တွေ့ပါပြီ…မောင်မောင် တမ်းတသော တပ်မက်သော အမွှေးတစ်ပင်မျှမရှိ ပြောင်ရှင်းမို့ဖောင်းနေသော စောက်ဖုတ်လေးကို ပေါင်(၂)ချောင်းဆွဲဖြဲရင်း မျက်လုံးများ ကျွတ်ကျမတတ် ကြည့်လိုက်သည်။ မောင်မောင် ဗွီဒီယို ကို မေ့သွားသည်။ အလားတူ နန္ဒာလည်း ဗွီဒီယို ကို မေ့သွားသည်။ နှစ်ဦးသား ကာမကြောတွင်သာ မျှောချင်နေ ကြသည်။ ပေါင်ကားထားသော်လည်း စောက်ဖုတ်လေးမှာ ပြဲအာမသွား စေ့နေသည်။ မောင်မောင်က လျှာထိပ်နှင့် အထက်အောက် စုန်ဆန်ထိုးခွဲပေးမှ နန္ဒာ့တင်ပါးကြီးနှင့် ပေါင်အတွင်းသားများ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကော့တက် လာပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာလည်း အာသွားသည်။
အတွင်းသားလေးများက ရဲနေပြီး အရည်ကြည်လေး များ စိမ့်ကျနေလေသည်။ မောင်မောင်က စောက်စိလေးကို စုပ်လိုက် စောက်ခေါင်းထဲသို့ လျှာကို ထိုးထည့်မွှေ လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တော့ နန္ဒာက ဖင်ကြီးကို ကော့ထိုးပေးလိုက်သည်။ ပြီး မောင်မောင့်ခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ကာ ခေါင်းလေးကိုမော့ မျက်စိစုံမှိတ်ရင်း… “ အား…ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်… အင်း…ဟင်း… အား…လုပ်ပါဦး…အား…” ဟု ညည်းညူကာ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှလည်း အရည်ကြည်များ ပိုမိုစိမ့်ထွက်လာသည်။ မောင်မောင်က စောက်စိလေးကို လျှာထိပ်နှင့် အမြန်ထိုးကလိလိုက်တော့… “ အင်း…ဦးရယ်…အား……ကောင်းလိုက်တာ လုပ်ပါတော့ ဦးရယ်……အင့်……အား……နန္ဒာ မနေနိုင် တော့ဘူး……အင့်……ဟင့်……အား……ရှီး……” “ နန္ဒာ အရမ်းကောင်းလား ဟင်……” မောင်မောင်က နန္ဒာ့ကို မော့ကြည့်ရင်းမေးတော့ နန္ဒာက မောင်မောင့် အဝတ်များကို အတင်းဆွဲချွတ်ကာ မောင်မောင့်လီးနားကပ်ရင်း…… “ အင်း……” ဟု ပြန်ဖြေကာ အရှည်(၇)လက်မ၊ လုံးပတ် သူမ လက်ကောက်ဝတ်ခန့်ရှိသော မောင်မောင့်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ စုပ်ပေးလေသည်။ နန္ဒာ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကြားတွင် မောင်မောင့်လီးကြီးက တဆတ်ဆတ်နှင့် တုန်ခါလာ သည်။ အကြောများ ပြိုင်းပြိုင်းထကာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိ သွေးကြောများက တဖျဉ်းဖျဉ်းနှင့် မောင်မောင် အံ ကြိတ်ထားမိသည်။ နန္ဒာကလည်း လီးကြီးကို အာခေါင်ထဲထိ ငုံစုပ်လိုက် လီးဒစ်ကြီးကို လျှာနှင့် လှည့်ပတ်လျှက် ပေးလိုက်နှင့် လုပ်ပေးရင်း လက်တစ်ဖက်က သူမ စောက်ခေါင်းလေးထဲကို လက်ညှိုးနှင့် ထိုးမွှေနေလေသည်။
ခ ဏကြာတော့ နန္ဒာက လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ချွတ်ကာ မောင်မောင့်ကို မော့ကြည့်ပြီး… “ ဦးရယ်…ဦး လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော်…နန္ဒာ ခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး……အင်း……” “ နန္ဒာရယ် မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး……ကဲ…ထ… ဦး ကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်……” ပြောပြောဆိုဆို နန္ဒာ့ ပုခုံးလေးကို ဆွဲယူထူလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူဇာ အပြင်က ပြန်ရောက်လာ သည်။ အိမ်တံခါး ပိတ်ထားသောကြောင့် အသာရပ်စဉ် ယောက်ျားလေးအသံကြားသောကြောင့် အသံမပေးဘဲ နောက်ဖေးပေါက်သို့ သွားကြည့်ရာ စေ့ထားသဖြင့် တွန်း ဝင်ပြီး ဧည့်ခန်းနားသို့ သွားချောင်းရာ နန္ဒာနှင့် မောင်မောင်တို့ကို တွေ့ရလေသည်။ သူဇာက အသံမပေးဘဲ မောင် မောင့်လီးကြီး တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ပြီး ခံချင်စိတ်တွေ ထကြွလာသည်။ မောင်မောင်တို့ကတော့ သူဇာ ရောက်နေမှန်း မသိကြ။ နန္ဒာ့ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်ရင်း မောင်မောင့်လီးကြီးက နန္ဒာ့ဆီးခုံကို ထိလိုက် ပေါင်ကိုထိလိုက်နှင့် နန္ဒာက လည်း မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး မောင်မောင့်ကို ဖက်ထားလေသည်။ သူဇာလည်း သူမဝတ်ထားသော စကပ်ရှည်ကို ချွတ်ကာ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုပါ ချွတ်လိုက်သည်။ အမွှေးမဲများ ဖုံးအုပ်ထားသော စောက်ဖုတ်ကြီး တင်း ကားနေသော တင်ပါးကြီးများ ပြည့်ဖြိုးဖြူဖွေးသော ပေါင်တံ(၂)ချောင်းတို့က စွဲမက်ဖွယ်ရာ…ပြီး…အပေါ်တွင် ဝတ်ထားသော ကိုယ်ကျပ်အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပြီး အတွင်းခံ ဘရာစီယာလေးကိုပါ ချွတ်လိုက်သည်။
မောင်မောင် က… “ နန္ဒာလေး…ဒီပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်……” နန္ဒာက နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်ရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကာ တစ်ချောင်း ကို ဆိုဖာနောက်မှီပေါ်တင် ကျန်တစ်ချောင်းကို ဆိုဖာအောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ချလိုက်သည်။ မောင်မောင်က ပြဲ အာနေသော နန္ဒာ့ စောက်ပတ်ဝတွင် လီးကြီးကိုတေ့ကာ အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးရင်း အဝသို့ ဒစ်ကလေးကို အသာမြှုပ်ထည့်လိုက်သည်။ “ အင့်…အား……ဟာ……အား……” နန္ဒာတစ်ယောက် ညည်းညူရင်း လွန့်လူးသွားသည်။ မောင်မောင်က နို့လေးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဝက်ခန့် ရောက်အောင် ဖိသွင်းလိုက်သည်။ နန္ဒာ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများပါ လီးကြီးနှင့်အတူ အတွင်းသို့ ကျွံဝင်သွား လေသည်။ နှုတ်မှလည်း… “ အား……နာလိုက်တာ ဦးရယ်……ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါ…… အင့်……အင့်……အား……” “ စွပ်……ပြွတ်……အင့်……အင့်……စွပ်……အင့်……” မောင်မောင်က တစ်ဝက်လောက်ကို မနားတမ်းဆောင့်ပေးရာ အရည်များ စိုရွှဲလာပြီး နန္ဒာမှာ တအင့်အင့် ဖြင့် ဖင်ကြီးကို ကော့ထိုးပေးလာသည်။ မောင်မောင်က ဆောင့်နေရင်းမှ နန္ဒာ့ခါးလေးကို စုံကိုင်ကာ အတင်းဆောင့် ဖိချလိုက်ရာ လီးကြီးမှာ နန္ဒာ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားကာ နန္ဒာမှာ ဗိုက်ကလေး ရှုပ်သွားပြီး အားကနဲ အော်လိုက်လေသည်။
ကြီးလည်းကြီး ရှည်လည်း ရှည်သော မောင်မောင့်လီးကြီးမှာ နန္ဒာ့ သားအိမ်ထိတိုင်ရောက် ကာ နန္ဒာမှာ လောက၏ အကောင်းဆုံး ကာမအရသာကြောင့် နာကျင်ခြင်းကို မေ့ကာ မောင်မောင့် လက်နှစ်ဖက် ကို ကိုင်ရင်း ဖင်ကြီးကို ကော့ထိုးပေးလိုက်သည်။ “ အင့်……အား……နာကောင်းကြီး ဦးရယ်…… အင့်…… …… ဖြည်းဖြည်း……အင့်……” “ ကောင်းလားဟင်……နန္ဒာ……” “ ကောင်း……အင့်…….ကောင်း…တယ်……အင့်……” “ စွပ်……ပြွတ်……ဒုတ်……အင့်……အား……” သူဇာမှာ ကြည့်နေရင်းက မနေနိုင်တော့ဘဲ မောင်မောင်တို့ရှိရာ သွားလိုက်မိသည်။ မောင်မောင်မှာ သူဇာ့ ကို ကြည့်ရင်း အံ့သြသွားသည်။ အဝတ်အစား မရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် နှစ်ယောက်စလုံး စားရတော့မည်ကို တွေး မိရင်း သူဇာ့ကို လက်ကမ်းပေးလိုက်သည်။ သူဇာကလည်း လက်ကမ်းပေးရင်း ဘာစကားမျှမပြော နန္ဒာ့ကိုလည်း အလိုးအဆောင့်မပြတ်…။ အား…… ကောင်းတယ်……ဆောင့်…… အား……အင့်…ဟူသော အသံနှင့်အတူ မောင်မောင့်လီးကြီးကို နန္ဒာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး နန္ဒာ့ကို ဖင် ကုန်းခိုင်းပြီး ဖောင်းထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ လီးကြီးကို ထည့်ကာဆောင့်လေသည်။ အချက်(၂၀) လောက် ဆောင့်ပြီးသောအခါ……အင့်…… အား…… ဦး ကောင်းလိုက်တာ…… အင့်……အင့်…… အ ရမ်းကောင်းလာပြီ…… ဆောင့်…… ဆောင့်……အား…… ပြီး…ပြီ…… အင်း……” နန္ဒာမှာ လေးဘက်ကုန်းနေရာမှ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပင့်ဆောင့်ရင်း ပြီးသွားကာ ဆိုဖာပေါ်သို့ အိကျသွား သည်။
မောင်မောင့်လီးကြီးမှာ အရည်များဖြင့် ရွှဲစိုကာ အစာမဝသေးသည့် မြွေလိုပင် တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်။ သူဇာက မောင်မောင့်လီးကြီးကို ကိုင်ကာ…… “ ဦးမောင်……ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နော်…… သမီး… အပေါ်က ဆောင့်မယ်…” မောင်မောင်လည်း ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ပေးလိုက်သည်။ သူဇာက မောင်မောင့်လီးကြီးပေါ် ခွထိုင်ကာ သူမ စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲကာ လီးကိုကိုင်တေ့ပြီး ဆောင့်ချလိုက်သည်။ လီးကြီးမှာ တင်းကျပ်စွာဖြင့် တဝက်ခန့် ဝင်သွား သည်။ သူဇာမှာ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့ရင်း ဖင်ကြီးကို ကြွလိုက် ဖိချလိုက်လုပ်ရင်း ဆောင့်ပေးနေသည်။ မောင်မောင်က အားမလို အားမရဖြစ်ကာ အောက်မှကော့ထိုးပေးလိုက်သည်။ သူဇာလည်း သူမ စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ အဆုံးထိ မဝင်သောကြောင့် အသာအောင့်ရင်း အားနှင့် ဖိဆောင့်လိုက်ရာ မောင်မောင်က ကော့အထိုး အရှိန်(၂)ခုပေါင်းပြီး အဆုံးထိဝင်သွားလေသည်။ “ အား……ဒုတ်……အင့်……နာလိုက်တာ ဦးရယ်……” “ ခဏပါ သူဇာရယ်……ဆက်ပြီး ဆောင့်လိုက်……” “ အင်း……စွပ်……ဒုတ်……စွပ်……ဒုတ်…… အင့်……. အင့်……အား……” သူဇာမှာ ဆောင့်ရင်း ဆောင့်ရင်း ကောင်းလာလေသည်။ အရည်များလည်း ပိုထွက်လာသည်။ သူဇာက နန္ဒာ့ထက် ပိုစုပ်အားကောင်းသည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသော်…… “ သူဇာ…ထ…ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းရအောင်……” သူဇာ ထရပ်လိုက်တော့ ပြွတ်ကနဲ လီးက ကျွတ်သွားသည်။
“ သူဇာ…ဆိုဖာနောက်မှီကို လက်ထောက်လိုက် ခါးလေးကိုကော့…… အေး……ဖင်ကို နည်းနည်းကော့ ပေး…” “ အင်း……” “ ရပြီ……ထည့်တော့မယ်နော်……” “ စွပ်……ဗြိ……ဒုတ်……အင့်……အင့်…… အား…… ကောင်းလိုက်တာ…… ဆောင့်ပါ…… အင့်……ဒုတ်…… ဒုတ်…… အင့်……ရှီး……အင့်……” သူဇာ့ နို့ကြီး(၂)လုံးမှာ ရမ်းခါနေသည်။ မောင်မောင်တစ်ချက်ဆောင့်တိုင်း တစ်ခါတုန်သွားသော သူဇာ့ တင်ပါးကြီးများက အင်မတန်ကြည့်၍လှသည်။ သူဇာက ဖင်ကြီးကို ဘယ်ညာရမ်းလိုက် နောက်သို့ ကော့ထိုးပေး လိုက် လုပ်ပေးရင်း လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများနှင့် ညှစ်ယူပေးနေသည်။ “ အင့်……ကောင်းလိုက်တာ……ဦးရယ်……သူဇာ…… ပြီးတော့မယ်…… ဆောင့်…… အင့်……အင့်……စွိ…… ဒုတ်…… အင့်……စွပ်……ဒုတ်…… ဗြစ်…… ဗြစ်…… အင့်…… အား…… ကောင်းလာပြီ…… ကောင်းတယ် …… အား…… ဆောင့်ပါ…… မြန်မြန်…… အင့်…… အင့်……” မောင်မောင်လည်း ပြီးချင်လာကာ အားကုန်ဆောင့်လေသည်။ အချက်(၂၀)ခန့် ဆောင့်အပြီးတွင်…… “ အား……အား……ဆောင့်……ဦး……အား…… ပြီး…… ပြီး…… အင့်……ဒုတ်……အင့်……” “အား……ကောင်းလိုက်တာ သူဇာရယ်…… အင့်……အင့်……” (၂)ဦးသား ညည်းညူရင်း မောင်မောင်ကလည်း လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သူဇာ ကလည်း သူမ စောက်ရည်များကို ညှစ်ထုတ်ရင်း မောင်မောင့်ကို လည်ပြန်ဖက်ကာ…… “ ကောင်းလိုက်တာ…ဦးရယ်…” “ ကောင်းရင် နောက်လည်း လုပ်ပေးမှာပေါ့…… သူဇာရယ်……” ပြီးပါပြီ။